Uhlelo lokusebenza lwe-Chatroulette likuvumela ukuthi uxoxe nabantu abangahleliwe abavela emazweni ahlukene.Ingxoxo imahhala ngokuphelele, awudingi ukubhalisa kuyo, okuqinisekisa ukungaziwa okuphelele.Ungaxhumana ngemiyalezo ebhaliwe, noma ngevidiyo kanye namashaneli alalelwayo.
Ingxoxo akaziwa nhlobo, ayidingi nhlobo ukubhaliswa.Ngokuqalisa uhlelo lokusebenza, ungaqala ukuxoxa ngaso leso sikhathi.Ukukhethwa kwe-interlocutor kwenzeka ngokungahleliwe.Uma ingxoxo ingasebenzi, ungashintshela ku-interlocutor olandelayo ngokuchofoza okukodwa.Okungenani abasebenzisi abangu-200,000 bahlala engxoxweni nsuku zonke, ukuze ukwazi ukuthola umuntu othakazelayo.Ungakwazi ukuxhumana ngomsindo nangevidiyo, noma nje ngengxoxo yombhalo.
Ukugcina i-oda ku-ChatRoulette kukhona ukulinganisela.Uma u-interlocutor eziphatha ngendlela engafanele, ungabika lokhu kumongameli, futhi umsebenzisi uzovinjelwa.
Ingxoxo akaziwa nhlobo.Unquma ukuthi yiluphi ulwazi ngawe ongalutshela u-interlocutor wakho.
I-Onanyugi ne-roulette yokuxoxa ⁠
Imuphi umbuzo ohamba phambili?Njengokuthi kungani udinga ama-snils?Ngizohlanganisa futhi - angazi ukuthi kungani i-fuck idingeka.
Kunecala lokugqekeza eliqulwa.
- Isisulu, unephansi.Ngitshele ukuthi bekunjani.
- Hhayi-ke, ngivuke ekuseni, ngilahlekile, (kahle, ngihlala ngigxuma lapho
ngivuka), ngiye ekhishini, ngibeke iketela, ngishayeke,
(Hhayi-ke, ngihlala ngishaya indlwabu uma ngibeka iketela).Hhayi-ke, hamba uyogeza, thatha
ishawa, i-t-t-mask (kahle, ngihlala ngishaya indlwabu uma ngigeza).Lapha, lokho kusho
aphume eshaweni, kungazelelwe - kukhala insimbi yomnyango.Hhayi-ke, ngiyovula
Hhayi ngafenda, (awu ngihlale ngishaya indlwabu uma ngiyovula umnyango).
Ngiyayivula - futhi lapho ngine-x-huyaks enenduku ekhanda, angikhumbuli:
p-p-ngishaye indlwabu noma cha.
Khona-ke uthole kanjani ukuthi babengama-Ukraine?)
Mntanami, ngitshele isilinganiso sakho senzuzo yokukhubazeka.ngitshele inani eliqoqwe kuyo yonke le minyaka yomsebenzi, umkhokhi wentela ongcolile
Njalo, ngihlezi ku-chat-roulette, ngigcina i-SNILS, ipasipoti, isitifiketi se-2NDFL nesithombe sembongolo yami nami, uyazi.Kusenjalo bazocela ukukhombisa, kodwa angikalungeli.PS: Ngethemba ukuthi wonke lawa ma-clowns, lapho uPeekaboo agcina esephenduke inyoka ye-polytechnic-propagandistic, azovinjelwa kakade.
Impi yolwazi, lapha ku-peek-a-boo yamadodakazi anjalo ezikhulu ubumnyama.Uhlala esifundeni Zhytomyr, kodwa ukhathazekile Arkhangelsk futhi Novy Urengoy.
Ngakho-ke ziningi ku-Pikabu.
ama-crests avele abe noshintsho kungazelelwe lomsebenzi.
Hryvnia usiza ukubungaza.Njengoba u-Aristovich esho: "Amanga ngumbono kazwelonke"
Ngoba yilokho okwenziwa amaqhawe
I-Great Green Delusion
Namuhla, ngokokuqala ngqa, wasebenzisa isikhundla sakhe esisemthethweni.Phakathi nosuku lomsebenzi, ngaqoqa ngahamba.epaki lamanzi.
Ngehla ngamagquma lapho, ngishushuluza kuzo zonke izinhlobo zamakamelo, ngibhukuda kuzo zonke izinhlobo zamachibi njengolwandle, ngizihlalele nje esihlalweni, ngiqhabula i-morsik.
Amahora okuvula, ngakho abantu abaningi.
awekho amafoni, awekho abasebenzi, awekho amakhasimende, akukho lutho.
amahora amabili nje obumnandi.waphumula - njengeviki leholide.
futhi konke ngoba:
- konke okufanele kukhokhwe namuhla - kukhokhwe,
- konke okufanele kunikezwe - kunikezelwe,
- konke okudingeka kwenziwe,
Konke okumele kube semgqeni kusemgqeni.
yonke into iyaphotha futhi iyaphotha, ukubamba kwami ​​iqhaza akukakadingeki.
Ngicabanga ukuthi kungifanele.
ngijabulele, futhi ake nawe, futhi, okungenani ngezinye izikhathi ube nosuku olunjalo lokuphumula ngokuzumayo.
Wake waphumula ehhotela elincane eGibhithe.February, hhayi abantu abaningi kangaka.Yimina ngedwa umRashiya.IsiNgisi sami singathanda ukuba ngcono kakhulu, kodwa kukhona okwakuhlala kusiphazamisa.Ngokuvamile, ngobunye kusihlwa ngahlangana nomkhulu oyedwa onobungane ephuze inkomishi yekhofi - wayefike esuka eLondon.Kanye nomzukulu weminyaka eyishumi nesikhombisa.Futhi beza ukutshuza futhi baphefumule umoya wolwandle.Ngakho-ke ngihlezi nalomkhulu, ngandlela-thile ngikhuluma: kanjani ukuphila, bathi, ngokujwayelekile, futhi yini manje ngempesheni eNgilandi, njalonjalo?Unqekuzisa ikhanda, uyachaza, futhi ebona ukungaqondi kahle ebusweni bami, ngokushesha uzama ukuchaza yonke into kalula ngangokunokwenzeka.Kodwa ngentshiseko nangaphandle kwesithunzi sokubhuqa.Yini engashiwo ngomzukulu wakhe.Ezimpendulweni zami ngayinye, wayedonseka umakhelwane, wayengakwazi ukuhlala nokuluma izindebe zakhe.Ekugcineni, ngemva kokunye kwezimpendulo zami, wavele wahleka kakhulu.Wangibuka umkhulu ekhombisa ukuxolisa wase eshaya umzukulu wakhe ngempama.Ngokusobala wayengayilindele leyo ndlela yokungabekezelelani kwezemfundo, wababaza:
- Kungani uhleka, Tom?
- Hhayi-ke, yena (ungikhomba) ukhuluma isiNgisi ngendlela ehlekisayo.
- Mtshele ngesiRashiya.
- Ini!?Kanjani ngesiRashiya?Ngizothini?Angisazi isiRashiya, mkhulu.
- Kulungile, wena hlanya.
Athumele umzukulu wakhe ekamelweni, amtshele amanye amabhokisi amathathu.Kodwa uTom waxolisa ngaphambi kokuba ahambe.
UCarlson usefikile futhi.phambili kwezomnotho.Kusihlwa 04/26/2022⁠
Akukhona nje ngami kanye nokuthunyelwe kwami.Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ezinye izindaba zihambisana nesihloko.
1. Inethiwekhi yama-hypermarkets okulungiswa kanye nama-cottages ehlobo e-OBI eRussia izoqala kabusha umsebenzi wezitolo kusukela ekupheleni kuka-April.// Kuboniswa isikhundla sezombangazwe.Nokho, inzuzo ibaluleke kakhulu.
2. UMnyango Wezimboni Nohwebo ulungise uhlu lwemikhiqizo ezothengwa kwamanye amazwe ngokuhambisanayo.// Cishe wonke umuntu ohambile manje uzongena eRussia ngaphandle kwemvume yomnikazi we-copyright.Ama-piastres, ama-piastres.
3. I-Latvia, iLithuania, i-Estonia yaphinda kabili izinsiza zikagesi ezivela eRussia ngo-March.// Ngokusobala, ukunyakaza okuhlelekile kwama-electron kuma-conductor angaphansi kwethonya lezombangazwe kunama-molecule egesi.
1. UXi Jinping uyale ukuba angenele umjaho wezomnotho ne-United States.// Indoda yathi, indoda izokwenza.Izindaba ezinhle ukuthi ukuze kusetshenziswe umyalo we-Great Xi, i-China kuzofanele ikhulise ukukhiqizwa.Futhi ngenxa yalokhu uzodinga izinto zethu eziningi.Futhi yebo, lesi akusona isitatimende.U-Xi uthe - i-China izokwenza.
2. I-Russia ne-China balungise ingqalasizinda yokuhweba ngemali yezwe.// Idola ngeke lifakwe ezindaweni zokuhlala phakathi kweRussia neChina.
3. Uhulumeni uzokhipha ama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-120 ukuze kuthuthukiswe imigwaqo.// Lezi yizindaba ezinhle ngempela.
4. Umdondoshiya waseFinland olungisa izingodo iStora Enso udayisa amasaha eRussia.// Kwakungeyakho - yaba eyethu.Isaphulelo esithengiswayo (inzuzo eqondile yomthengi) - hhayi ngaphansi kwama-euro ayizigidi ezingu-70.
5. Amabhange amaningi kakhulu e-Russia angena esigabeni esisebenzayo sokulungiselela ukukhishwa kwamakhadi ohlelo lokukhokha lwe-Chinese UnionPay.// Futhi kuhle.
6. Imali engenayo yentela evela ezinkampanini ze-IT ikhule ngamaphesenti angama-30 kusukela ekuqaleni konyaka.// Kuhle kakhulu.Lezi zindaba ziphakamisa ukuthi ama-offshore schemes e-IT aphukile, futhi izintela zemboni ziyekile ukugeleza phesheya.Futhi lokhu naphezu kokuthi izintela ze-IT ziyancipha.
7. Umkhiqizi wokudla waseFinland u-Valio uthengise ibhizinisi lakhe lesiRashiya, kuhlanganise nohlobo lwe-Viola, eqenjini le-Velcom.// Yonke into esendlini, endlini!
1. I-Gazprom" ithe iPoland ibophekile ukukhokhela igesi ngo-April 26.
2. IPoland yenqaba ukukhokhela igesi yaseRussia ngama-ruble.
3. Inkampani yegesi yasePoland i-PGNIG ithole isaziso esivela kwa-Gazprom mayelana nokumiswa okuphelele kokunikezwayo kusukela ngomhla ka-27 Ephreli.
4. IPoland yayeka ukuthola igesi yaseRussia ngemva kokwenqaba ukukhokha ngama-ruble.
// UkuqeqeshwangamakatiasePoland ?
1. Khazin: empeleni, umnotho waseNtshonalanga uyinhlekelele.// Qaphela ukuthi angizange ngibhale lokhu.
2. EJalimane, bathi amaBhange Amaphakathi azoqala "ukufihla" ama-dollar abo.// Futhi azokwenza.
Izimpahla kanye nokushintshaniswa kwemali.I-ruble namafutha ahlelekile, igolide liwile kancane.
Kodwa izimali "ezinzima, eziguquleka ngokukhululekile" zamazwe "aphucukile" zingene emgwaqeni.Ngeke ngizisole ngendawo eposini, ngizobonisa izithombe.Amashejuli - kusukela ngo-Agasti kuya ku-Ephreli:
I-Euro: susa u-12%
Iphawundi laseBrithani: Minus 11%
I-yen yaseJapan: khipha 16%
I-ruble yokhuni: 0%.Iqiniso lahamba ngezinyawo ku-130+.
CNY.I-Central Bank yaseChina yenza buthaka kakhulu i-yuan uma iqhathaniswa nedola: isuka ku-6.32 yaya ku-6.55.Abahlaziyi abahlukene baveze izizathu ezihlukene - ukusuka ku-covid kuye ekuphenduleni kumathonya angaphandle, kodwa empeleni lokhu akuyona into engaphezu komnyakazo odingekayo ukukhulisa ukuncintisana kwemikhiqizo yaseShayina emakethe yomhlaba - ukwehla kwemali kazwelonke ukuze kwandiswe ukusebenza kahle kokuthekelisa.
Ukuhwebelana kwamasheya, inkomba ye-MICEX.Wabheka ngezansi ngezansi, futhi wagxuma ngokuzethemba, ebuyela emhubheni 2250 - 2750. Kuyoba khona.
Kafushane: ziyanda izimpawu zokuthi labo abahambayo bazohamba ngendlela ephucuzekile, abaningi ngeke bahambe nhlobo.Inhlekelele ayizange yenzeke.Futhi ngeke kwenzeke.
Izincomo zabangewona abatshalizimali: sigcina imali engukheshi, sengeza ama-ruble amahhala ediphozini noma sisebenzise.
Umlayezo oyimfihlo:Sicela ungangeni ezingxoxweni ngala magama angukhiye alandelayo:
1. Isifundo esidwetshiwe!(Cha);
2. Futhi hamba uyothenga ukheshi omningi njengoba udinga (asikho isidingo);
3. Amanani aphindwe kabili, ama-curd abe ama-ruble angama-60!- asikho isidingo sokuxoxisana ngezintengo zabathengi kuze kube yilapho kuphuma isikhathi esiphezulu senkinga.Sizokhuluma ngezintengo zabathengi ngoJuni;
4. U-AlexRadio ubhala ukuthi konke kuhamba kahle kanjani ngathi, bekufanele ngabe sibeke unswinyo isikhathi eside: cha, u-AlexRadio ubhala ukuthi singcono kakhulu kunalokho obekufanele kube khona ngomthamo onjalo wemikhawulo, futhi kuzoba ngcono uma senza. lokho okusephucwa unswinyo .
Faka isikhalazo kubagebengu bagebe kumabonakude wase-Ukraine
Madoda angazi ukuthi ngingakuthinta kanjani, ngibhala lapha, ngiyethemba kukhona ozokudlulisa lokhu kini.Iqiniso lokuthi ungakwazi Hack ithelevishini Ukrainekuhlekubi ngoba ukugebenga kubi.Yebo, kuhle kakhulu, iqiniso lokuthi ungakwenza kufanele linikezwe ngenxa yezinga lakho lolwazi lobuchwepheshe, kodwa kungani imilayezo oyishicilela kulayini ogijimayo ingenangqondo?U-Zelensky uyanikezela, inhlolovo yokujoyina iRussia - akudingeki ube uCaptain Obvious ukuze uqonde ukuthi lezi zindaba ziwumphumela womunye ukukhwabanisa.Izindaba ezinjalo ngeke zithinte lutho, ikakhulukazi, zizobangela ukumomotheka ngakolunye uhlangothi nokucasuka ngakolunye.Uma ufuna ukuba nomthelela wangempela ezilalelini zase-Ukraine, sebenzisa izindaba zangempela: izinombolo zokulahlekelwa engxenyeni ye-Armed Forces yase-Ukraine eshicilelwe ohlangothini lwaseRussia, uhlu lwezindawo zokuhlala eziye zalawulwa yiRussian Federation. kanye ne-LDNR, ukuthi Amabutho Ahlomile ase-Ukraine ashaya izinto zawo ezingezona ezivamile, ezinye izindaba ezinomsindo ezingabangela ukukhula kokuhlulwa.
PS: okuthunyelwe ngaphandle kokulinganisa.
Amaqhawe aphambili ekhaya
E-Italy, udwendwe lwababaleki base-Ukraine lubingelelwa ngokukhala kokuthi "amaNazi!"⁠
Inani labantu baseYurophu abaziqonda ngokwanele izizathu Zokusebenza Kwezempi Okukhethekile e-Ukraine liyaqhubeka nokukhula.Izizathu zalokhu zingababaleki abangamademoni abavela e-Ukraine, abanganqikazi ukuhamba emadolobheni aseYurophu nge-swastika yebutho lesizwe lase-Azov.
Kutshalwe endaweni engafanele
Kukhona umdlalo "Ini? Kuphi? Nini?".I-Voroshilov:
- Isikhulu sezokuphepha sikahulumeni u-Shcherbakov udlala ngathi.Ukunaka, umbuzo uwukuthi: "Kuyini entweni yama-47?"
Kudlula umzuzu wengxoxo.Ochwepheshe abanayo imibono;bathatha umzuzu owengeziwe, futhi ekugcineni u-Alexander Druz uphendula ngokungabaza:
“Asazi ukuthi kukhonani lapho.
- Impendulo ilungile.Akumele wazi ukuthi kukhonani lapho.
Ngezinye izikhathi kwanele ukuzwa indaba yokuphila komuntu ukuqonda ukuthi ubungane obuhle.Uzakwethu emsebenzini ubukeka njengendoda evamile, iqembu livame ukuba yindoda, izihloko zengxoxo ziyahambisana - abesifazane, amafulethi, izimoto.Kodwa akazange angene engxoxweni.Ngeke wazi ukuthi kungani, kuze kube muva nje sibe nenkulumo ethinta inhliziyo.Ngaphezu kwalokho, ngokusho kozakwabo, u-Andrei.Ngaba nohlobo oluthile lobuntwana.Umama wafika ezosebenza eMoscow, wazinza endlini yokulala, nodadewabo omdala egone.Ngahlangana nendoda, yamyisa endaweni yayo, baqala ukuhlala, ngazalwa.Baba ngenyanga yesithathu empilweni yami, wathi ingane akusiyo eyami, sebenza, hamba.Umama wabuyela ehostela, waqala ukuhola imali yokuhlala.Lapho ngineminyaka engu-8, udadewethu washayiswa imoto washona.Umama ukhubazekile futhi empeleni ngihlala ngiwumuntu onekhono.Wabe esesebenza njengompheki endlini yokudlela efektri.Abaphathi baye emhlanganweni, bamshiyela ikamelo ehostela elinombandela wokuthi asebenze njengomhlanzi.Futhi ngathatha isibopho sami ukumsiza.Iminyaka engu-6 yokuphila kwami ​​yaphenduka usuku olulodwa lwe-groundhog - ngivuka ngo-3 ekuseni, ngihlanza amaphasishi, amahhovisi, ngihlanza iqhwa, ngiye esikoleni, ngiphinde ngihlanze, izifundo, ngilale.Ehlobo, ngesikhathi samaholide, ngazama ukusebenza njengomshini wokulayishwa, ukuhlanza, lapho bangiyisa khona.Ngemva kwebanga lesi-9 ngangena esikoleni sobuchwepheshe, ibutho alizange likhanye kimi - umondli oyedwa emndenini, umama ukhubazekile.Ngandlela-thile waqala ukubuyela ekuphileni okuvamile, futhi ngikhumbula usuku lapho, kusukela emholweni wokuqala ngineminyaka engu-16 ubudala, ngahamba ngokuqaphela futhi ngathenga amakhilogremu angu-4 nezingilazi ezimbili ze-ayisikhilimu.Asikwazanga ukukukhokhela.Ngakho-ke, lapho wabelana ngezindaba ezivela empilweni nasebuntwaneni - mayelana nokuthi ubaba waqala ukungibeka kanjani ngemuva kwesondo, umama wathenga iloli elihle lokulahla, ugogo washiya indlu, umndeni wonke waya olwandle - akukho engingakusho, futhi hhayi ngoba ngiyi-snob noma i-introvert.
Ingxoxo yevidiyo i-Roulette - umsizi we-inthanethi ekutholeni abangani abasha
Ekunakekeleni kwabo bonke abavulekele ukuxhumana!Ngabe ufuna abangani abasha, abaxhumanisi ezithakazelisayo, abantu abanomqondo ofanayo?Uyafuna ukuhlangana nothando lwakho noma udlale ngothando?Sebenzisa ngokwezinjongo zakho insiza ye-inthanethi ekhethekile - I-Chatroulette!Le sevisi elula futhi elula ayisetshenziswa abantu bakithi kuphela, kodwa futhi izigidi zabantu abavela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba.Abantu abanentshisekelo yokuqomisana abavela e-Europe naseMelika, amazwe angomakhelwane, njengawe, sebenzisa ingxoxo yevidiyo ukuze uthole abantu abafanele ukunakwa.
Uneminithi lamahhala.Ungamoshi!Xhuma engxoxweni yethu.Chitha isikhathi ngendlela ejabulisayo nenengqondo, ngethemba lemihlangano ethokozisayo okuthi ngokuzayo isuke kumodi ye-inthanethi iye empilweni yangempela.Ingxoxo yevidiyo namantombazane isivele isize izinkulungwane zabantu ukuthi bathole umlingani wabo womphefumulo.Phela akukho okuvimbela abantu abathandanayo ukuthi bashintshane ngolwazi lokuxhumana ukuze baqhubeke nokujwayelana ngaphandle kwesayithi!
Ungayisebenzisa kanjani ingxoxo yevidiyo ye-Roulette
Noma yimuphi umsebenzisi we-inthanethi angaba yilungu lokucinga okubili kwabantu abahehayo.Ukuhlinzeka ngesithombe sevidiyo kanye nekhono lokuqhuba inkhulumomphendvulwano, ikhompuyutha kufanele ifakwe izipikha, umbhobho kanye nekhamera yevidiyo.
Ingxoxo yevidiyo iyatholakala kubahlanganyeli abangaziwa: awudingi ukubhalisa kusayithi futhi ubonise igama lakho langempela!Abanye ababambiqhaza barekhoda isethulo esifushane sobuntu babo, lokhu kusiza ukuthi bazethule ngokukhanya okungcono kakhulu.Le ndlela ikhulisa ukusebenza kahle kokuxhumana, kepha ayidingeki.
Ukuqala inqubo yosesho nokuxhumana, vele uchofoze inkinobho ethi "Qala ukusesha umngane".Ngemva kwalokho, ubuso babantu abangaba abantu abasha buzovela efasiteleni lengxoxo.Ungazama ukuqala ingxoxo nanoma yimuphi umuntu omthandayo.Kungcono ukweqa abantu abangajabulisi ngokuchofoza inkinobho ethi "Okulandelayo".
Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-Chatroulette inikeza inqubo yezindlela ezimbili zokuthola abangani.Lokhu kusho ukuthi abantu ababukele esikrinini nabo bayakuhlola bese benquma ukuthi ungumuntu olungile yini ongakhuluma nabo noma cha.Ngakho-ke ungamangali noma uphatheke kabi uma othile esuka kuwe eya kumsebenzisi olandelayo.Lona umdlalo nje, amakhulu ezinkulungwane zabantu abamba iqhaza kuwo, phakathi kwawo kuzoba khona abantu ozokwenza abangane nabo.
I-Chatroulette namantombazane iyithuluzi lokuzijabulisa nokufuna ubudlelwano obungathi sina
Le ndlela yokuxhumana ilungele abantu abanamahloni, abangakhulumisani.Phela, akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuqala kalula futhi ngokwemvelo ingxoxo nabantu abangabazi futhi agcine inkhulumomphendvulwano ngekhono.Ukuqaphela ukuthi i-interlocutor ukude futhi wena ngokwakho ungaphazamisa ingxoxo nganoma yisiphi isikhathi ngokuthinta inkinobho kuthulisa futhi unikeze ukuzethemba.
Kubantu abasha abanesizotha, i-roulette yokuxoxa namantombazane iyindlela enhle yokuthuthukisa amakhono okuxhumana, funda ukuzizwa ukhululekile enkampanini yabesifazane, futhi ngezinye izikhathi uqale ubuhlobo bangempela.
Ukuxoxa ngevidiyo namantombazane kunikeza abafana ukuzethemba ngoba zonke izintokazi ezikhona nazo ziyathanda ukuthandana.Lokhu kwenza umsebenzi ube lula futhi kwandisa amathuba.Engxoxweni ngevidiyo, kufana nokuphila: ukuze ujabulise intombazane, udinga ukucoceka, ubungane, inhlonipho, isithakazelo, nokuncoma.Ngesikhathi esifanayo, kufanele kukhunjulwe ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ulungile kangakanani, ngeke ukwazi ukujabulisa bonke abesifazane.Kodwa udinga konke?
Thatha isinyathelo.Sebenzisa i-chatroulette ngezinjongo zakho - futhi uzothola umuntu olungile!
Akekho omunye umuntu ozokucela ukuthi uthele ikhofi bese uvule i-photocopier, ngeke akubize ngesidlo sasemini futhi ngeke akubone ukubukeka kwakho okuhle kakhulu - ama-internship awasafani.Ifomethi entsha isinika ini, indlela yokwenza okuhlaba umxhwele ngemonitha futhi ingabe kulula ngempela kuma-zoomers ku-inthanethi?Abahlelibe-N + 1, kanye nesiteji esithi "Russia - Izwe Lamathuba", izazi zokusebenza kwengqondo kanye nochwepheshe, banquma ukuqonda isihloko: kanjani ama-internship ngesikhathi somsebenzi okude.
I-coronavirus yenze ukuthola ama-internship kwaba nzima kule ntwasahlobo: ngokocwaningo lwe-ANCOR, isabelo sezinhlangano ezihlinzeka ngama-internship sehle sisuka kumaphesenti angama-66 ngo-2022 saya kumaphesenti angama-50 ngo-2022.
Ezinye izinkampani ziphoqeleke ukuthi zinciphise isabelomali sabafundi abasafunda umsebenzi: amaphesenti ayi-18 abaqashi abahlolwa (kubantu abangama-240) bavumile ukuthi bawahoxise ama-intern ngenxa yenkinga yobhubhane.Abanye, kunalokho, bakwazi ukuzivumelanisa ngokushesha nefomethi entsha - nakuba ngokuqapha.
Ngakho, i-Sberbank yazibekela umsebenzi wokuhambisa i-inthanethi yezinyanga ezimbili ze-Sberseasons internship ngenkathi igcina isimo sehhovisi elinobungane.Ukuze ujoyine iqembu, uhlelo olwengeziwe lokuzijwayeza lwenzelwe abaqeqeshwayo.
“Emasontweni amabili okuqala, saqala ukufonela umfundi ngamunye ngendlela enobungane ukuze sithole ukuthi bayaphila yini nokuthi babeludinga yini usizo.NgoLwesine, siqale ukuba nekhefu lokusondeza ikhofi.Sisanda kuxoxa, sixoxa ngezincwadi, amafilimu nakho konke okujabulisa abafundi bethu ngesikhathi sokuqeqeshwa, ”kusho i-vc.ru eSberbank.
Esikhundleni semihlangano yobuso nobuso - izingxoxo e-Zoom (okuyinto, ngendlela, ehanjelwa inani elikhulu labazokhethwa - futhi ngaphandle kokulibala).Isibonelo, i-ATON ithole inombolo yerekhodi yezicelo lapho ihlela i-internship evamile "i-ATON ivula iminyango" yabafundi: i-webinar ngayinye yayihanjelwe abantu abangaba ngu-500 ngokwesilinganiso.Ngemuva kwalolu hlelo, abahlanganyeli bahlolwe, abahamba phambili bathola isimemo sokuqeqeshwa.
Siyini isifunda sakho
Izingxoxo ezijwayelekile, izinkomfa zomsindo nevidiyo, izabelo, ukubika, nabafundisi abaku-inthanethi sekuyisikhathi eside kuyinto evamile kwezinye izinhlangano, ngakho ukushintshela ku-inthanethi akuzange kuthuse.Ifomethi eku-inthanethi ibavumela ukuthi banikele isikhathi kumfundi ngamunye.Ngakho-ke, izingxoxo zeqembu, ezivame ukubandakanya uhlu lwemibuzo noma ukwazana okufushane nomfakisicelo ngamunye (ngale fomethi, ithuba lokuzibonakalisa lincane), kwathathelwa indawo izingxoxo eziku-inthanethi zomuntu ngamunye nabaqokwe abahamba phambili abanentshisekelo ngempela ekusebenzeni.Ifomethi ye-inthanethi ikuvumela ukuthi "ukhiphe ukhula" ngokushesha futhi wonge isikhathi: bobabili abakhethiwe abangaqiniseki ngokukhetha kwabo, nabamele inkampani.
"Sisebenzisana nephrojekthi ye-Internship 2.0 esetshenziswe yi-Russia - Land of Opportunity platform futhi sesivele senza umkhuba we-inthanethi unyaka wesibili," kusho u-Olga Grishina, inhloko yoMnyango Wezinhlelo Zezemfundo Yesikhwama Sosizo Lwezindlu Nezinsiza. Inguquko.- Ngalesi sikhathi, sesenze izifundo eziyisishiyagalolunye eziphathelene nezindaba eziseqhulwini emkhakheni wezindlu kanye nezinkonzo zomphakathi.Abafundi nabathweswe iziqu banikeza izixazululo ezimweni ezilingisayo: sithatha ababhali bemibono engcono kakhulu yama-internship.”
I-Internship 2.0 iphrojekthi yesikhulumi seRussia - Land of Opportunity esiza abafundi ukuthi bathole ukuqeqeshwa kwenye yezinkampani ezinkulu eRussia.Isebenza kanjani?Umqashi ubeka imisebenzi egxile ekuzijwayezeni (amacala) endaweni yesikhulumi sephrojekthi.Umfundi ube esexazulula leli cala.Umphumela ungaba yisisekelo sephepha lethemu noma ithisisi.Izinkampani zihlaziya futhi zihlole izixazululo eziwumphumela.Abaphumelele bayamenywa ukuba bazilolonge noma baqeqeshelwe umsebenzi.Ngonyaka owodwa, izinkathi ezimbili zephrojekthi zenzeka, imiphumela nayo ifinyezwa kabili ngonyaka - ebusika nasehlobo.
Ochwepheshe beSikhwama Sezezindlu kanye Nezinsiza Zomphakathi bahlanganise imisebenzi ngendlela yokuthi icala ngalinye licwilise labo abasaqeqeshwa ngokugcwele ohlelweni lwamanje lwezindlu kanye nezinguquko zezinsizakalo zomphakathi.Isibonelo, abafundi bakude babale umthelela wokulungisa ukonga amandla kusetshenziswa umkhiqizo wesofthiwe yedijithali.
"Yebo, kunezindawo lapho ama-internship kufanele afake khona ubukhona besikhungo kanye nokufunda kwaso, isibonelo, lokhu kusebenza emisebenzini ehlobene nokuhlolwa kwebhilidi lokuhlala ukuze kutholakale ukushiyeka," kusho uGrishina."Noma kunjalo, njengengxenye yomqhudelwano we-WorldSkills (futhi ingxenye yesikhulumi seRussia - Land of Opportunity), kwahlongozwa enye indlela yokusebenza: inhlolovo yekhaya elibonakalayo: amahora amabili, ababambiqhaza bafunde into ku-inthanethi, bahlonza ukushiyeka - okwangempela. isakhiwo sisebenze njengesibonelo. ”
Abafundi bamanyuvesi e-Chuvash Republic, Krasnodar Territory, Ivanovo kanye ne-Vologda Regions bathole ama-internship bekude ku-Housing and Communal Services Fund.
Ama-internship aku-inthanethi anikeza ithuba elihle kakhulu kochwepheshe be-novice abavela ezifundeni ukuthi bazilolonge.Abaqashi abaningi bayabakhetha.Njengoba u-Ekaterina Konopleva, iNhloko yoMnyango Wokusetshenziswa Kwemiklamo Ekhethekile yoMnyango Wokuqashwa Kwabasebenzi we-VSK Insurance House, echaza, labo abazobhapathizwa bavame ukukhuthazwa futhi banesithakazelo emsebenzini.
“Kithina, lokhu kuwumhlahlandlela wokuthola abazongenela ukhetho ezifundeni kunabaseMoscow.Sibheka izihlabani ezivela emadolobheni amancane, futhi sizinikeze ithuba lokujoyina iqembu laseMoscow, zizibonakalise futhi zihlale ne-VSK, "kwengeza uKonopleva.
Ngakho-ke, umfundi ovela eTyumen, u-Angelina Chemurtan, ngenxa yephrojekthi ethi "Professional Internship 2.0", uthole ithuba lokuthola i-internship ekude ekuqinisweni kwezobuchwepheshe kwezindawo zokuhlinzeka ngamanzi kanye nezindawo zokuthuthwa kwendle eMnyangweni Wezokwakha weRussian Federation.
"Uma siqhubeka nokuthuthukisa iphrojekthi yethu futhi siyifaka esenzweni, khona-ke kuzokwazi ukuphuza amanzi empompini ngaphandle kokuhlanzwa okwengeziwe ngezinzuzo zezempilo," kusho u-Angelina Chemurtan.
Noma, isibonelo, ummeli uDanila Avdeev waseVladimir, owawina indondo ye-Olympiad "Nginguchwepheshe" emthethweni womthethosisekelo, waqeda i-internship kuhulumeni waseSt.
I-“I Am A Professional” i-Olympiad yezemfundo yezinga elikhulu yefomethi entsha yabafundi bemisebenzi ehlukahlukene.Imisebenzi yabahlanganyeli yakhiwa ochwepheshe abavela emanyuvesi aphambili aseRussia kanye nezinkampani ezinkulu kakhulu ezweni.Akuyona i-abstract erudition ehlolwayo, kodwa ulwazi lochwepheshe.Abahlanganyeli abahamba phambili bathola ithuba lokuqeqeshwa ezinkampanini ezinkulu neziphathimandla.Abafundi beBachelor, ochwepheshe kanye nabafundi be-master bangabamba iqhaza.
“Kube mnandi kimina ukujwayelana nezici zokusebenza kohlelo lwezinkonzo zomphakathi eSt. ngisafunda futhi ngisebenza, ngakho ukuthutha ngeke kwenzeke.Ngakho-ke, empeleni, kulokhu, ubhubhane lungivulele amathuba amasha, ”kusho u-Avdeev.
Ubhubhane luzodlula, amakhono azohlala
Uphinde waphawula ukuthi ifomethi eku-inthanethi iwukuqeqeshwa okuhle kakhulu kwamakhono okuxhumana okude, isibonelo, ukusebenzisa i-Trello ne-Google Meet: ubhubhane luzodlula maduze noma kamuva, futhi lawa makhono ngokusobala azosebenza kahle.Ngaphezu kwalokho, ngokusho kuka-Avdeev, i-internship eku-inthanethi ibandakanya ukusebenza okwengeziwe nokuzibandakanya enqubweni yomsebenzi.
“Ezinhlanganweni eziningi, i-internship ingumsebenzi onomshini wekhofi kanye ne-photocopier: qamba, phrinta, ulethe.Uma yonke le "midlalo yasehhovisi" ifiphala ngemuva, imisebenzi iba ecacile.Ngakho-ke, sibe nemisebenzi eminingi yokudala ku-inthanethi: senze i-chat bot kuTelegram ukuze sixhumane nabazingeli nabazongenela izikhundla ezinhlakeni zikahulumeni, ”u-Danila ukhumbula i-internship.
Ngokocwaningo olwenziwa yi-Intern Bridge, eminyakeni emihlanu, eyisithupha, eyisikhombisa edlule, abaqashi baqasha abaqeqeshwayo ikakhulukazi ukuba benze umsebenzi olula, wasehhovisi, ukuze babe umsizi.Manje sekugxilwe ekuhlonzeni ithalente lesikhathi esizayo.
Abahlanganyeli be-internship eku-inthanethi e-ConsultantPlus baphinde baveza ithuba lokubamba iqhaza ekuthuthukisweni nasekuxazululeni izimo zangempela phakathi kwamabhonasi amakhulu omkhuba we-inthanethi.
“Ngangithanda ukwenza ukuhlaziya amathuluzi angempela ohlelo lwe-ConsultantPlus nezimbangi zalo, nokucabanga ngezindlela zokuthuthukisa umkhiqizo.Yilokhu nginesithakazelo esiqotho kukho, "kusho u-Anton Filatov, obambe iqhaza ku-internship, umfundi we-RANEPA.
Imisebenzi yabaqeqeshwayo yayihlanganisa ukusebenza kuphrojekthi kanye nokuqeda imisebenzi yomuntu ngamunye ngokuhambela ukuqeqeshwa kanye nemihlangano ngesikhathi esimisiwe.Usuku lwaqala ngokuqeqeshwa kanye nemihlangano ye-inthanethi.Khona-ke abahlanganyeli ngaphakathi kwethimba baxoxa ngephrojekthi futhi basebenza ngezabelo zomuntu ngamunye.
“Uhlelo beluqinile.Naphezu kwesikhathi esimisiwe samakilasi kusukela ngo-10:00 kuya ku-14:00, kwadingeka ngibambezele.Nokho, kulungile uma ufuna ukuphumelela.Ngaphandle kwalokho, kuyathakazelisa, ”kungeza uFilatov.
Ukusebenza ukude nama-internship konga imali yokuhamba kanye nesidlo sasemini sasehhovisi futhi kunciphisa isikhathi esivame ukusetshenziswa ekuxhumaneni okungezona ezomsebenzi (ukweqa izingxoxo ezijwayelekile kanye nezingxoxo zezinhlelo zempelasonto ngesikhathi sekhefu lekhofi).Le fomethi ivumela ukugxila emisebenzini ethile, kodwa ngesikhathi esifanayo kuholela ekuhlukaniseni okukhulu koqeqeshwayo / isisebenzi futhi, ngenxa yalokho, kuholela ekuzizweni kwesizungu.Futhi isizungu sibulala ukubandakanyeka enqubweni nasekugqugquzeleni.
Lesi isiphetho esifinyelelwe umlobi nomcwaningi waseMelika u-Dan Schawbel kumthengisi wakhe omusha othi Buyela Kubantu: Indlela Abaholi Abakhulu Abadala Ngayo Ukuxhumana Enkathini Yokuzihlukanisa.
U-Shavbel uxoxisane nabaholi abasebasha abayi-100 abahamba phambili abavela ezinkampanini ezifana ne-Facebook, Google, Uber, Nike kanye ne-Walmart futhi wabuza mayelana nesimo sabo sengqondo ngefomethi ye-inthanethi nobuchwepheshe ekuhambeni komsebenzi.Inkampani ka-Schawbel, i-Future Workplace, ibambisene ne-Virgin Pulse ukuhlola abaphathi nabasebenzi abangaphezu kuka-2,000 emazweni angu-10.
Ubani ngempela onesizungu emsebenzini?Ucwaningo luveze ukuthi amanye amaqembu adinga kakhulu ukubambisana kunamanye.Ngokwesibonelo:
Amadoda (amaphesenti angu-57) azizwa enesizungu emsebenzini ngaphezu kwabesifazane (amaphesenti angu-43)
Ama-Introverts (amaphesenti angu-63) azizwa enesizungu emsebenzini ngaphezu kwama-extroverts (amaphesenti angu-37).
I-Gen Z (amaphesenti angu-45) kanye nezinkulungwane zeminyaka (amaphesenti angu-47) bazizwa benesizungu emsebenzini kaningi kuno-Gen X (amaphesenti angu-36) kanye nama-Baby Boomers (amaphesenti angu-29).
Ngokusho kwesazi sokusebenza kwengqondo u-Olga Batueva, kunenkolelo evamile yokuthi kulula esizukulwaneni se-zoomers (i-Generation Z - abantu abazalwa phakathi kuka-2022 no-2022) ukuzivumelanisa nefomethi ye-intanethi.Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi kukhululekile futhi kuwusizo kubo ukusebenza kule modi.
Ukuhunyushwa kwe-"chatroulette" ngesi-Arabhu
I-Omegle, i-Ometv, nezingosi ze-chatroulette ezinyezezingosizezingxoxo ezingahleliwe ezingcono kakhulu ezizokusiza ukuthi ubhangqe nomuntu ongamazi eningaba nengxoxo naye ubuso nobuso.
Izingosi ze-roulette ze -Omegle, i-Ometv, ne-Chatezinye zezindawo ezingcono kakhulu zokuxoxa ezingahleliwe ezikusiza ukuthi ubhangqe nomuntu ongamazi ongaba nengxoxo eyodwa kuye eyodwa.
Xoxa nge- roulette yengxoxoengahleliwenjll.noma yikuphi e-UK, awukwazi ukuphuma kalula nganoma yisiphi isikhathi ngomakhalekhukhwini nomakhalekhukhwini.
Xoxa nge- roulette yengxoxoengahleliwenokunye.noma yikuphi e-UK awukwazi ukuhamba kalula ngaphandle nganoma yisiphi isikhathi ngomakhalekhukhwini nomakhalekhukhwini.
Lapho lesi sigaba sichofozwa, amantombazane amahleaxoxangekhasi lengxoxo engahleliwe lizoqala ukukuvulela ikhamera.
Uma lesi sigaba sichofozwa, amantombazane amahle ekhasi le-Chat RouletteRandom Chat azoqala ukukuvulela ikhamera.
Izibonelo zihloselwe ukusiza kuphela ekuhumusheni amagama nezinkulumo eziseshwayo ezimweni ezehlukene.Asizikhethi noma situse izibonelo, futhi zingaqukatha amagama angalungile noma imibono.Sicela usazise ngezibonelo ocabanga ukuthi zidinga ukulungiswa noma ukususwa.Ukuhunyushwa okungalungile noma kwezwi ngokuvamile kumakwa ngokubomvu noma okuwolintshi.
Ngibuyisele u-2022 wami.I-chatroulette ishintshe kanjani nokuthi kwenzekani lapho manje
Eminyakeni eyishumi edlule, wawungakhomba noma ubani ngomunwe wakho bese uthi ngokuzethemba: “O, ngikubonile ku-roulette yengxoxo!”, Bese ubuka ukusabela komuntu odidekile ozama ukuqonda ukuthi uyadlala noma cha.Ngaleso sikhathi, kubonakala sengathi bonke ontanga yami babazi ngale ngxoxo yevidiyo.Izithunywa zeselula zazingakakabi khona, izinkundla zokuxhumana zase zisencane, ngakho-ke ukuntuleka kokuxhumana kwenziwa ezingxoxweni ezingapheli zasebusuku nabantu abangabazi abavela kuwo wonke umhlaba.
Nganquma ukubuyela ku-chatroulette.com ngemva kweminyaka eminingi ukuze ngibone ukuthi kwenzekani lapho nokuthi izethameli zayo zishintshe kanjani.
Izinguquko zaqala “kusukela embundwini” - ukwakheka kwengxoxo sekuhluke ngokuphelele.Ayisekho inkinobho "elandelayo" edumile, isithathelwe indawo ngokuthi "yeqa", enomsebenzi ofanayo.Kwakukhona futhi ukukhetha ukuthi ufuna ukubheka ukukhanga okuyinhloko kwe "roulette" - amadoda ashaya indlwabu.Kodwa ngesizathu esithile, umbuzo oqondile wawumboziwe, unikeza ukukhetha ukuthi kungani uye kusayithi: ukuyoxoxa nje noma usukulungele ukungena kwalasha we-Intanethi engalinganiselwe.Njengoba kuvela, akuthinti lutho.
Umuntu wokuqala ngqa engahlangana naye engxoxweni wayemakwe “Indawo ejabulisayo yokuxoxa cishe nganoma yisiphi isihloko.Yigcine ihlanzekile (Indawo ethakazelisayo yokuxoxa cishe nganoma yisiphi isihloko. Yiba nesizotha) ", ibonise ingxenye engezansi yomzimba futhi, njengokungathi ibanjwe yisifo sokuwa, idonsa izitho zangasese zangaphandle.Ukunquma ukuthi ngeke sikwazi ukuba nokuxhumana okukhiqizayo - kanye nokuzala - "ngiyeqa" ngonembeza ohlanzekile.Ngamafuphi, iminyaka iyahamba, kodwa akukho okushintshile.
Ngenkathi i-Chatroulette isezingeni eliphezulu, iwebhusayithi ye-Mashable yashicilela izifundo eziphethe ngokuthi u-14% wabasebenzisi be-chatroulette ushaya indlwabu phambi kwekhamera yewebhu.Kuzwakala sengathi ziningi kakhulu - cishe njalo kwesithathu.Kungakhathaliseki ukuthi sasihlale sinenhlanhla, noma izifundo zazingalungile kakhulu.
Amantombazane akhononda ikakhulukazi ngalokhu: ngokweziqinisekiso ze-interlocutor yami engahleliwe, ihora ngiwukuphela komuntu owanele ongazange ambonise noma yini engadingekile futhi engazange azame ukumncenga ukuba enze ubulili obungokoqobo.Yiqiniso, ngemva kwemibuzo ezenzakalelayo "Unjani?"nokuthi “Wenzani?”, ingxoxo enengqondo yoma ngokushesha.Angicabangi ukusho, kodwa mhlawumbe kwaba ukungafuni ukuxhumana enkonzweni yezokuxhumana okwenze ozakwabo bangaphambili babheke indlela yokuphuma kulesi simo, okwaba yi-banal.
Kodwa ukuxhumana akuzange kunamathele.Abantu abalele babelokhu becwayiza esikrinini njalo, okusobala ukuthi bangene engxoxweni ngaphambi kokulala futhi kubonakala sengathi ukhohlwe ukucisha ikhamera yewebhu.Abesilisa bathanda kakhulu ukuxhumana namantombazane, ngakho ezikhathini eziningi bayangivumela ukuba ngidlule, futhi labo abangangivumelanga ukuba ngingene babenza izinto ezihlukahlukene ezingayifaki ngokusobala ingxoxo.Isibonelo, cishe imizuzu emihlanu ngibuke ukuthi umnumzane othile eminyakeni edlule wayegoqa amazambane abilisiwe nge-herring endaweni yendlu yaseRussia, futhi akazange asabele nakancane emisindweni yengxoxo.Mhlawumbe bekuwumdlalo wami wedwa engingazange ngiwuthokozele.
Ngendlela, ushintsho olubaluleke nakakhulu olwenzeka ku-chatroulette: ngaphambili kwakungenzeka ukukhetha ubulili kanye neminyaka ye-interlocutor (ngokubhalisa okukhokhelwayo), kodwa manje akukho lutho olunjalo.Ngakho-ke, kubafana, ithuba lokuxhumana nabobulili obuhlukile livame kakhulu ku-zero, futhi empeleni iningi labo liza lapha ngenxa yalokhu.Ngenxa yalokho, ukudlala ngothando ku-inthanethi okungenzeka kube usesho oluyisicefe amahora ambalwa.
Nokho, kukhona labo abangahambisani nokuxhumana "okuvamile".Ngokudabukisayo, omunye wabakhulumeli bami abathakazelisa kakhulu waba yisiboshwa sangaphambili.Wakhuluma ngokuthi wayehlezi kanjani (noma, ngamazwi akhe, “ukukhonza”) igama elingaphansi kwe-athikili 159 ye-Criminal Code of the Russian Federation ngokukhwabanisa, mayelana nobungane bakhe obungasebenzi kahle nokuthi yini manje emvimbela ukuba angaphinde abuyele emuva - umkakhe. nendodakazi encane.Mayelana nokuthi yonke into isebenza kanjani ejele futhi kungani, isibonelo, kulula kakhulu ukuhlala esifundeni saseNovosibirsk kunesifunda saseTomsk.Mayelana nokuthi ufuna ukwakha indlu yakhe kanjani, aqale ipulazi elincane futhi apheke ushizi.Waze wabonisa nama-tattoos akhe - ama-wind roses kumakholomu akhe nasemadolweni.Esimweni sokuqala, basho, njengoba esho, ukuthi "akasoze afaka ama-epaulettes wamaphoyisa", okwesibili - "akasoze aguqa phambi kwamaphoyisa."
Ngokuvamile, kwaphuma ingxoxo efuna ukwazi kakhulu, eyaphazanyiswa inkulumo yomkakhe: "Oleg, b ****, wena s *** al, ake silale."Ngamagama athi "ngiyaxolisa, zay" wanqamula.Mhlawumbe u-Oleg waxolisa kimi - kwazi bani.
Kwakukhona nentombazane enesiphetho esinzima, owabeletha eneminyaka engu-14, njalo "ephuma ngaphandle" futhi naye inkhulumomphendvulwano engathandeki mayelana nokuba ngumama wakuqala.
Abesifazane abangashadile baseCaucasus, abaneminyaka engaba ngu-50 ubudala, okwathi, ngasizathu simbe, bephendula isitatimende sami sokuthi iPyatigorsk isendaweni ethile eduze kwaseKabardino-Balkaria, bathukuthela baqala ukuklabalasa ukuthi lokhu kwakungekho nhlobo, kodwa angiqondi lutho. ku geography.Ukucabangela kokugcina yiqiniso lamanzi ahlanzekile, ngakho-ke, ngikholelwa kubo, nganquma uku-google futhi kwavela ukuthi amaphuzu amabili ebalazweni ahlukaniswe ngamakhilomitha ayikhulu kuphela.
Indoda eyayidakwe ngokweqile eyangibona njengozakwethu wangaphambili uSeryoga.Indoda edakwe ngokulingene, amehlo ayo abemanzi te futhi efakazele ukuthi "amadoda awakhali."
Abezinye izizwe nabo bafika, kodwa kuyaqabukela, futhi ngasizathu simbe, akekho noyedwa kubo owayenesithakazelo eRussia - futhi ikakhulukazi eSiberia - eminyakeni eyishumi edlule.Mhlawumbe udlisiwe.
Ngokuvamile, amahora ambalwa engiwachithe engxoxweni abonakala eyisicefe kimi.Angazi ukuthi isizathu sikimi yini, ngoba ngivuthiwe futhi ngalahlekelwa umdlandla wami wangaphambili wokuxhumana nabantu engingabazi ku-inthanethi.Noma abantu ngokwabo sebeyisicefe ngempela - babonakala belindele ukujatshuliswa, njengokungathi beze ohlotsheni oluthile lokusebenza ku-inthanethi, kuyilapho bengafuni ukunikeza lutho njengembuyiselo.
Kodwa "i-fellow-traveller syndrome" isasebenza: uma uthola umuntu ozokulalela, ungagcina okuningi kusazi sokusebenza kwengqondo.Ngesizathu esithile, bengilokhu ngilolo hlobo lomuntu.
I-roulette yengxoxo yevidiyo iyisevisi elula ye-inthanethi yokuqomisana
Noma ubani ofisa ubuhlobo obusha, ufuna ukukhuluma ngezihloko ezithakazelisayo, ukwenza abangane, ukuhlangabezana namantombazane, kufanele azame indlela elula futhi elula yokuphola ku-intanethi - xoxa i-roulette.Lesi sisetshenziswa esikhethekile sinikeza ukufinyelela ezigidini zabasebenzisi be-inthanethi abathanda ukuxhumana okuthakazelisayo, uthando nobungane njengawe.Ukukhethwa kwe-interlocutor kwenzeka ngokuzenzakalelayo, kungaba umuntu waseRussia, Belarus, Germany, USA ngisho nase-Australia.
Ingxoxo yevidiyo namantombazane ivumela abafana ukuthi bazijwayeze amakhono okuxhumana nabobulili obuhlukile futhi benze izintombi ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba.Kunamathuba amaningi okuthi phakathi kwalaba baxhumanisi abangahleliwe kuzoba nemimoya eyizihlobo.I-Chatroulette namantombazane ingumsizi onokwethenjelwa ekutholeni umlingani wakho womphefumulo!
Isebenza kanjani i-roulette yengxoxo yevidiyo
Noma ubani onekhompuyutha efakwe ikhamera yevidiyo, imakrofoni nezipikha angafinyelela ukuxhumana kwe-inthanethi ngaphandle kwemingcele.Phela, yile mishini eyenza kube nokwenzeka ukusakaza isithombe sevidiyo nokuqhuba ingxoxo.
Akudingekile ukucacisa igama, kodwa ingxoxo yevidiyo inikeza amathuba amaningi kubasebenzisi ababhalisiwe kunalabo abangaziwa.Ukuze uzethule ngokukhanya okuhle kakhulu, kunconywa ukuthi urekhode ividiyo yokwamukela emfushane.
Ngokuchofoza inkinobho ethi "Qala Ukusesha", uba yilungu lesistimu ngokuzenzakalelayo.Isithombe somuntu ongase akhulume naye siyavela efasiteleni lengxoxo yevidiyo: ubona futhi uzwe umuntu, uyakubona futhi uyakuzwa.Uma ubuntu be-interlocutor bubonakala bungajabulisi noma bungathakazelisi kuwe, cindezela inkinobho ethi "Okulandelayo" bese udlulela kumuntu omusha.
Yiziphi izinzuzo ze-roulette yengxoxo yevidiyo
Okokuqala nje, ingxoxo ngevidiyo iyithuluzi lokuthola abantu abasha obajwayele ukuze nikhulume ngokukhululeka.Izinjongo zokusebenzisa isevisi yethu kumuntu ngamunye zingahluka.
Ukunqoba ama-complexes.Amahloni nokuntuleka kwamakhono okuxhumana kwenza ukuphila kube nzima kakhulu.Ingxoxo yethu yevidiyo isiza ekuzuzeni ukuzethemba, ukufunda ukungena kalula engxoxweni, ukuqhubeka nengxoxo nabantu ongabazi ngisho nokudlala ngothando.Ukuqwashisa ngokungaziwa, ukuhlukaniswa ne-interlocutor ngesikrini sokuqapha, kanye nekhono lokuphazamisa ingxoxo nganoma yisiphi isikhathi kunikeza umuzwa wokuphepha futhi kukuvumela ukuba uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile.
Ukuthola umbhangqwana.I-Chatroulette namantombazane ikunika ithuba lokuqala ubudlelwano obungeyona ucingo, obujabulisayo be-inthanethi, ukuthuthukiswa okuzoxhomeka kuwe kuphela.Mhlawumbe nithandana kangangokuthi ninquma ukuxoxa ningaxhunyiwe ku-inthanethi.Kwabaningi, ingxoxo yethu yevidiyo isiphenduke indawo yokuhlangana enothando lweqiniso.
Ukwesekwa kwengqondo.Esikhathini esinzima, lapho kungekho othandekayo eduze, akulula ukubhekana nezinkinga eziye zanqwabelana uwedwa.Ezimweni ezinjalo, ngisho nomfokazi angathulula umphefumulo wakhe, futhi ukusekelwa kokuziphatha kanye nezeluleko ezinhle ezivela kumfokazi kungaba usizo kakhulu.
Ungabathola kanjani abangani abasha ku-chatroulette
Kulula ukujwayelana, ukuqhuba izingxoxo, ukuqala ubudlelwano engxoxweni yevidiyo.Ungathukutheli lapho u-interlocutor ephazamisa ingxoxo kuqala: akunakwenzeka ukujabulisa wonke umuntu.Ingxoxo yethu yevidiyo namantombazane ikunikeza ithuba lokuxhumana nezinkulungwane zabantu.Zama ukubukeka unobungane, ucocekile, unobungane, uhlakaniphile, unake umxhumanisi, futhi nakanjani uzohlangana nomuntu onesithakazelo esiqotho kuwe.
Yiba nomphakathi, ungangabazi ukuba ngowokuqala ukuxhumana naye - futhi abantu abasha abathakazelayo nabawusizo bazovela empilweni yakho!
Imininingwane: I-Porn Chat Roulette Namantombazane: ucansi abathandanayo 18+
I -roulette yezingxoxo zocansiayiyona nje indlela yokugwema isithukuthezi uma kwenzeka kuvuka inkanuko yocansi, kodwa ikhono lokuthola amantombazane noma abafana abaningana abaphuma emakhulwini abaxhumanisi abangahleliwe bokuqomisana nokuxoxa, ukushaya indlwabu noma ucansi phambi kwekhamera yewebhu.Ngokungangabazeki, umhlaba wesimanje, ogcwele I-inthanethi, wethule umphakathi ngobuchwepheshe obuningi nokuzijabulisa, futhi wenze kwaba nokwenzeka ukuhlanganyela ekuthwebuleni engxoxweni yevidiyo.Ngaphezu kwalokho, zonke izindawo zokuxhumana ngocansi ku-inthanethi zaqala ukukhula, okuhlanganisa ngisho nobulili be-BDSM obubonakalayo kanye nazo zonke izendlalelo zayo, futhi amantombazane akumakhamera ewebhu avusa inkanuko afunda ukuthola ama-orgasms kanye ne-squirt kukhamera yewebhu, khona kanye emoyeni!
Yonke intombazane ifuna umfana oyedwa ukufeza zonke izifiso zakhe, futhi wonke umfana ufuna wonke amantombazane afeze isifiso sakhe esisodwa.
Qhubeka, ku-portal ye-RuFreeChats, izivakashi zikhululekile ukwenza noma yini eziyifunayo, engxoxweni ungabonisa konke, izivakashi ziba imicabango, izifiso kanye nemizwelo.Lapha kuphela - ukukhethwa okukhulu kakhulu kwezingxoxo - ungakhetha ngokuzimela imodeli oyithandayo phakathi kwenani elikhulu lamaphrofayili atholakalayo, ahlungwe abe yizigaba ezihlukene nezinhlobo, noma uye kule ngxoxo eku-inthanethi yabaxhumanisi abasondelene, khetha ikhandidethi oyithandayo bese uqala. ukuzijabulisa njengamanje.Ingosi yethu yezingxoxo iyatholakala ubusuku nemini, nokuthi kufanele ubhalise noma cha, zinqumele, ngokuvamile, ucabange futhi ujoyine insiza yocansi eshisayo, futhi okubaluleke kakhulu, amantombazane nabesifazane bangempela phambi kwamakhamera ewebhu.
Ukuthwebula iwebhu: ingxoxo yevidiyo yocansi nomuntu oxoxa naye ngokungahleliwe wokuqomisana bukhoma ocansini
I-roulette yengxoxo yevidiyo yabantu abadala, lapho ungakhombisa khona yonke into namantombazane nabafana, abesifazane noma amadoda!Ngomphakathi we-RuFreeChats.com we-porn chat voyeurs kanye nababonisi, ubulili ku-net abuyona into entsha isikhathi eside futhi akuyona into enyanyekayo noma eyesabekayo, ngoba abantu abaningi bebelokhu beyisebenzisa isikhathi eside futhi banelisekile.Yiziphi izinzuzo zokushaya indlwabu ngekhamera yewebhu kanye nezinsizakalo zokuzijabulisa zazo zombili izinhlangothi?
- zibandakanye ekuthwebuleni okubonakalayo kumodi ebukhoma njengamanje, ucije amakhono akho okuyenga nabaxhumanisi bangempela;
- I-roulette yengxoxo yocansi engu-18+ inikeza imizwa emisha, akekho ongabikezela kusengaphambili ukuthi iyiphi intombazane noma insizwa, owesifazane noma indoda ezokujoyina;
- ku-roulette yezingxoxo wena ngokwakho ubeka imingcele ekukhulumisaneni kukhamera yewebhu, ungabonisa yonke into;
- engxoxweni yevidiyo evusa amadlingozi nomuntu oxhumanisa okungahleliwe, wena ngokwakho ukhetha i-interlocutor ngokuthanda kwakho ngokuchofoza inkinobho ethi "Okulandelayo" uma ukuxhumana nomuntu othile kungasebenzi.
I-Porn Roulette: umehluko kwezinye izingxoxo 18+
Ingxoxo yevidiyo namamodeli ekhamera yewebhuIngxoxo evamileXoxa Roulette 18+
Ungakwazi ukuxhumana namamodeli wekhamera yewebhu, ubona i-interlocutor yakho kusengaphambili
Ukuxhumana kwekhamera yewebhu enemikhawulo, ukucwaninga okungu-18+ futhi akukho ukuhlubula kukhamera yewebhu
Ngokuchofoza okulula, ukhetha i-interlocutor engahleliwe kusengaphambili ngokunquma ubulili obufunayo bomfokazi kanye nohlobo.
Amamodeli ashaya indlwabu kukhamera yewebhu, angakwenza engxoxweni evamile, kwimodi yeqembu noma ngokuyimfihlo
Ukuxhumana nabantu bangempela okungenzeka babe abasakazi abavamile noma ama-blogger
Ukujwayelana nocansi olungokoqobo nomuntu ongamazi, ngaphandle kokuhlolwa kanye nemikhawulo enzima
Isilinganiso senani lamamodeli ekhamera yewebhu ku-inthanethi: angaba ngu-3000
Izinombolo eziningi ezincane, kokubili abavakashi nabasakaza
Engxoxweni yocansi nomuntu ongahleliwe, kunzima kakhulu ukubala ukuthi bangaki abantu ongabazi ongahlangana nabo
Iminyaka ehlukene nezinhlobo: ukuzulazula okulula nokukhetha kuye ngezici, izintandokazi
Iminyaka eminingi engaphansi kwe-18 (izingane nentsha), ama-blogger nabasakazi abangaphezu kuka-30+
Impela noma iyiphi iminyaka yabantu abangahleliwe abafuna ukuphola okujwayelekile nezingxoxo 18+ kukhamera yewebhu
Ngokwezibalo, inqwaba yabasebenzisi bezingxoxo ezivusa inkanuko - cishe u-50% - abafana namantombazane abaneminyaka engu-18 kuya ku-35, abesifazane namadoda angaphezu kuka-35+ - futhi 50%
Isigaba sezivakashi ezingxoxweni ezivamile kusukela kwabaneminyaka eyi-10 kuye kweyi-18 cishe silinganiselwa ku-32%, abaneminyaka engu-45+ - 68%
Izivakashi - cishe u-40% - amadoda amadala angaphezu kuka-35+, cishe 20% - abafana (18-25+) no-35% - amantombazane aneminyaka engu-18 kuya ku-24, bonke abanye ngabesifazane abaneminyaka yobudala
I-Chat Roulette - sekuyisikhathi semidlalo ebonakalayo phambi kwekhamera yewebhu nomuntu ongamazi othakazelisayo
Uma unesizungu ngokuxhumana okujwayelekile ku-roulette yengxoxo elula, sekuyisikhathi sezinjabulo zangempela, ubulili obubonakalayo phambi kwekhamera yewebhu nomuntu ongaziwa ngokuphelele ngaphambili.Amamodeli ama-sultry: amantombazane amancane aneminyaka engu-18+, abesifazane abadala abaneminyaka engu-25+ ngisho nezalukazi ezineminyaka engaphezu kuka-35+ ngeke zikuvumele ukuthi ube nesithukuthezi futhi udabuke engxoxweni yethu yevidiyo yesiRashiya nomuntu ongene ngokungahleliwe.Izintokazi ezivusa inkanuko yewashi ziziphatha ngokukhululeka kakhulu, lapho izethameli zabo zikhululiwe impela.Ngokubukeka kwabo okuhle, ubuhle bewashi bayakwazi ukujabulisa kakhulu abesilisa nabesifazane bobulili babo.Impela, ingxoxo yevidiyo eku-inthanethi ivusa isifiso esikhulu sokusondelana kwabaningi - ukuphuma ngekhamera yewebhu.Amamodeli wewebhu anonya XXX anobuso obuhle kanye nezibalo ezizacile aziphatha kabi kakhulu, ngoba akukho mingcele endabeni yokuxhumana engxoxweni,i-roulette evusa inkanukoyemidlalo esondelene ku-inthanethi ngokuvinjelwa kokuvakasha kwezingane.
I-roulette yengxoxo ye-Porn inikeza ithuba elihle lokujwayelana ku-inthanethi, ngokushesha ngesimo somxhumanisi wakho kukhamera yewebhu..Ngenjabulo enkulu, amatshwele asemancane navuthiwe anikela ngocansi olubonakalayo olupholile olusebenzayo phambi kwekhamera yewebhu ngemodi yomuntu oyedwa.Befuna ukujabulisa umlingani wakho ngokushesha nangokunamandla ngangokunokwenzeka, abalingisi abanonya baqala ukufaka ubuthi ezindabeni ezihlukahlukene eziyimfihlo.I-roulette yengxoxo yevidiyo yocansi namantombazane ayishumi nesishiyagalombili plus ithandwa yibo bonke abathandi be-Wirth nokuziphatha okuxekethile bahlala namamodeli angewona ochwepheshe.Amantombazane adlalayo abeka amakhamera awo abukhoma ngendlela yokuthi cishe noma yimuphi umbukeli angakwazi ukubona kalula zonke izintelezi zabesifazane ngokuningiliziwe.Le ngxoxo yevidiyo namantombazane, kufanele ukhethe intombazane oyithandayo kulezo ezinikezwa ngokungahleliwe uhlelo ngokwalo futhi ujabulele imibukiso epholile ebonakalayo bukhoma noma uvele uxoxe ngezihloko zansuku zonke.Empeleni, uma ufisa, ungabhalisa, konke lokhu kumahhala,
Ingxoxo ye-Porn roulette engu-18+ ene-interlocutor engahleliwe, izinzuzo eziku-inthanethi:
uzungu nge interlocutor okungahleliwe, ngeke wazi ukuthi ubani ozovela phambi kwakho ngakolunye uhlangothi kwesikrini;
lokhu akuyona nje ingxoxo yokuxhumana ngombhalo noma ukuphola ngekhamera yewebhu, kodwa ingqungquthela ephelele nabantu bangempela - ingxoxo lapho ungabonisa khona yonke into;
izonikeza ithuba lokuxhumana okujabulisayo nokukhululekile namantombazane noma abafana bezizwe ezahlukene;
izokunikeza ithuba lokuthola okuvelayo okuningi okumangalisayo ngesikhathi sokugilamkhuba okuhlangene kukhamera yewebhu ngemodi engaziwa;
izokuvumela ukuthi ushintshisane ngokuhlangenwe nakho kocansi futhi ujabulele ukuzilibazisa okuhlangene okugcwele nokuxhumana kukhamera yewebhu nge-interlocutor engahleliwe;
izonikeza ithuba lokuchitha ihora elithakazelisayo lamahhala enkampanini yomngane oshisayo noma i-macho enothando.
Qala impilo entsha engxoxweni yevidiyo yezithombe zocansi ezingokoqobo njengamanje!Isibonelo, amantombazane ngokwawo wengxoxo yewebhu ye-RuFreeChats.com abona lokhu njengendlela enhle yokwenza imali ngaphandle komzamo omkhulu, futhi ngesizathu esihle.Amamodeli adumile kumasayithi wekhamera yewebhu athola imali eningi ngesikhathi esifushane, ngaphandle komzamo omkhulu.Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukuba sesimweni esihle futhi ushaye indlwabu ngokwemvelo kukhamera yewebhu, uthole i-orgasm kukhamera yewebhu, futhi ngezinye izikhathi udinga ukusquirt kukhamera yewebhu!
Amantombazane nabafana abangavinjiwe baxoxa nge-pickup roulette 18+
Kumakhasimende e-website ye-RuFreeChats.com, ukuba khona kwe-assortment enkulu yabantu abangavinjelwanga abavela emhlabeni wonke, abalungele i-strawberry 18+, phakathi kwabo kukhona amantombazane athakazelisayo akwaziyo ukuqeda nge-squirt orgasm, kusho ukuthi banayo. ukukhetha ukuzijabulisa kwabo ngokocansi.Engxoxweni yevidiyo yocansi i-roulette izokwazi ukwanelisa ngisho nomuntu okhetha kakhulu, njengoba iku-inthanethi ongabonisa yonke into.
Futhi, ukungabikho kwesidingo sokubhalisa ukubuka imibukiso yocansi kanye ne-pickup amantombazane engxoxweni ye-inthanethi akusho lutho ngaphandle kokungabikho kwesidingo sokufaka idatha yakho noma kuphi.Lokhu kusho ukuthi isayithi lingaqinisekisa ukungaziwa okuphelele kwababukeli balo kanye nokuphepha kwedatha yabo.
Ukuphendula imibuzo ethandwayo mayelana nokuxoxa nomuntu ongahleliwe
Ukuxoxa ngocansi nomuntu oxoxa naye okungahleliwe kuyathakazelisa ngoba awazi ukuthi ubani ozoba umxhumanisi wakho ovusa inkanuko.Isiza sizokhipha ngokungahleliwe (ngokungahleliwe) umuntu ojwayelekile olungele ukuxhumana nekhamera yewebhu, kuye ngobulili obukhethiwe.Ngakho-ke kujabulisa kakhulu ukufuna umaqondana noma umaqondana eningaba naye ucansi oluyi-virtual ngemodi ebukhoma yomuntu oyedwa.
Impela kunjalo!Lokhu kwengeza kuphela uzungu lwewebhusayithi ngokwayo.Ngeke wazi ukuthi ubani ozoba i-interlocutor, kodwa uma kwenzeka, ungashintsha imodeli futhi uthole okwengeziwe ngokuthanda kwakho.
Konke kuyathakazelisa engxoxweni ne-interlocutor engahleliwe!Kusukela ekukhethweni kwemodeli ebonakalayo kakhulu nokusebenza okuvusa inkanuko ngokwayo.Kodwa, izivakashi ezixoxa nge-interlocutor ezingahleliwe azizami njalo ukwenza ukuxhumana kwazo kuhluke futhi kuthakazelise, konke kuncike esimweni ngesinye isikhathi.
Amamodeli ethu awalokothi ahlangane empilweni yangempela, kodwa ku-roulette yengxoxo yocansi amamodeli amakhamera ewebhu angewona ochwepheshe, ngakho imihlangano ingenzeka ngokuvumelana.Yiqiniso, amantombazane nabafana abaningi bakhetha ukuhlala bengaziwa futhi bazitike izethameli ngefomethi ebonakalayo.Lesi isiqinisekiso sabo sokuphepha, kodwa noma yini ingenzeka.
- Udinga ukuziphatha ngendlela efanayo empilweni yangempela nomuntu omthandayo, nakuba ungakwenza ngendlela ehlukile.Akukho ukuvimbela kule ngxoxo futhi ungabonisa yonke into!
👉 Ngihlangane nemodeli yewebhu enhle engxoxweni engahleliwe, ngingamthola kanjani manje ukuze ngiqhubeke nokuxoxa kukhamera yewebhu?
- Ezimweni ezinjalo, sinemodi yokusesha, faka isiteketiso noma ikheli lekhasi lomuntu oxoxa naye noma umkhulumeli ozithakaselayo, sesha futhi uqhubeke ukuxhumana ngezihloko ozithandayo.
- Ngokufanayo nakwabanye, akufanele ufunge futhi ube luhlaza.Zama ukuhlonipha zonke izivakashi ezingahleliwe ezizovela emifudlaneni, asikho isidingo sokuzilulaza noma ukuzihlambalaza!
Ingxoxo evusa amadlingozi nomuntu oxoxa naye ngokungahleliwe: i-roulette yabantu abadala (18+)
Ebulilini obubonakalayo, zisekhona izinzuzo.Ngenkathi sidlala engqungqutheleni yethu yevidiyo, ungahamba uyobeka iketela, udle ophaya abambalwa futhi ubheme.
Ukujwayela ukushaya indlwabu kukhamera yewebhu engxoxweni evusa amadlingozi nabaxhumanisi abangahleliwe akukaze kube lula njengathi: i-roulette yengxoxo yocansi 18+ iyindawo engcono kakhulu yalabo abafuna abesifazane, amantombazane noma abafana abafinyeleleka kalula ukuze babe nobudlelwano obuseduze ku-inthanethi!Ukuthwebula izithombe zocansi ngekhamera yewebhu ebukhoma sekufinyeleleke kalula, futhi amantombazane athola i-orgasm ngekhamera yewebhu ngokuqondile ku-inthanethi! xoxa namamodeli apholile, bese unquma ukuthi iyiphi oyithandayo.Mhlawumbe, ngokuya ngemizwa yakho, uzokuthanda kokubili, uma uthanda, ungamane ushintshe izingxoxo.Yebo, empeleni, uma usunesikhathi eside unesizungu ngevidiyo yocansi elingisiwe,
Ulwazi Lwabazali: Hhayi Olwezingane |Imithetho kanye Nephrothokholi Evikelekile |Inqubomgomo ye-DMCA yokuthobelana namakhukhi |Ukuhambisana nezidingo zokubala 18 USC 2257
Copyright © 2022-2022 unyaka.Isayithi i-rufreechats.com ihloselwe kuphela abantu abangaphezu kweminyaka engu-18 ubudala!Uma uneminyaka engaphansi kwe-18, kufanele ushiye ngokushesha indawo evusa inkanuko yabantu abadala!
Kungani i-Chat Roulette ingasebenzi: okufanele ukwenze
Akulula ukuphendula ukuthi kungani i-Chat Roulette ingasebenzi.I-World of Accessiqoqe izimbangela ezivame kakhulu zezinkinga futhi yathola izindlela zokuzixazulula.
Ukuntuleka koxhumano lwe-inthanethi noma isivinini esiphansi sokuxhuma kuyisizathu esivame kakhulu esenza i-Chatroulette ingasebenzi.Kuyadingeka ukuhlola isivinini sokuxhuma nokuzinza kwesiteshi se-inthanethi
Uma umsebenzi wezobuchwepheshe wenziwa kuseva, khona-ke ukufinyelela ku-Chatroulette nakho kuzoba nzima - kunconywa ukulinda isikhashana.
Uma ikhasi eline-Roulette lingavulwa, kungenzeka ukuthi liphelelwe yisikhathi - lidinga ukulayishwa kabusha.Kuwusizo ukusula inqolobane kusiphequluli osisebenzisayo futhi uvule kabusha ikhasi.
Uma inguqulo endala ye-Adobe Flash Player ifakiwe ohlelweni, udinga ukubuyekeza isidlali, ngaphandle kwalokho i-Roulette ngeke isebenze.Ngemva kokufaka i-Flash Player, udinga ukuqala kabusha isiphequluli sakho
Ngokuvamile inkinga yokwehluleka ilele kusiphequluli ngokwaso - udinga ukufinyelela ku-Chatroulette usebenzisa esinye isiphequluli.Ngokuvamile lokhu kusiza ukuxazulula umbuzo wokuthi kungani i-ChatRoulette ingasebenzi.
Kukhona futhi izimo zokuvimba ukufinyelela kusayithi ngumhlinzeki ngokwakhe - ngekheli le-IP elisetshenzisiwe.Udinga ukuqalisa kabusha irutha noma ushintshe ikheli lasesizindeni se-inthanethi usebenzisa i-VPN noma i-anonymizer
Ukufinyelela ku-Chatroulette nakho kungavinjwa umlawuli wesistimu - lokhu kuvame ukwenzeka emsebenzini
Isizathu esingavamile esenza i-Chat Roulette ingalayishi ubukhona bamagciwane ohlelweni.Ukuze uxazulule le nkinga, kufanele usebenzise iskena ngemva kokulanda isofthiwe ye-antivirus.Indlela ephumelela kakhulu yokulwa namagciwane yi-Kaspersky Anti-Virus.
Kungani kukhona isikrini esimnyama ku-Chatroulette
Uma kukhona iwindi elimnyama kwesokunxele engxoxweni yevidiyo, sibheka izizathu ezimbalwa.Mayelana nabo - ngokuqhubekayo.
Ikhamera yewebhuayixhunyiwe - udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi isebenza ngendlela efanele.Ukufaka kabusha nokuvuselela abashayeli nakho kuyasiza.
Uma i-Chatroulette ingayiboni ikhamera yewebhu exhunyiwe, udinga ukuhlola izinhlelo ezingayisebenzisa okwamanje.Kufanele ziqedwe - uma singekho isithombe ku-ChatRoulette, cishe kungenzeka ukuthi ikhamera yewebhu ayisebenzi.
Ngokuvamile, ngaphambi kokuqala i-ChatRoulette, kufanele uvale wonke amathebhu esiphequluli, ngaphandle kwethebhu ene-Roulette ngokwayo.
Ngokuvamile ikhamera yewebhu isebenza kahle, kodwa ayinikezi isithombe ku-Chatroulette.Ukuze ulungise inkinga, udinga ukushintsha i-ID yale khamera yewebhu.Kulula ukwenza - kunezinhlelo eziningi zokuvula, isibonelo: http://anti-banner.com/
Ingxoxo yevidiyo isebenzisa i-flash player.Uma isiphelelwe yisikhathi, i-Chatroulette ngeke isebenze nayo.Umdlali udinga ukubuyekezwa abe yinguqulo yakamuva.
Umbuzo wokuthi kungani i-Chat Roulette ingasebenzi cishe uzoxazululwa.Uma kungenjalo, phinda yonke inqubo echazwe ngenhla.
Kungani kunefasitela elimnyama kwesokudla e-Chatroulette
Izizathu zokuthi kungani iwindi le-interlocutor limnyama:
Enye yamakhamera ewebhu ayisebenzi;
Kusetshenziswa uxhumano olunesivinini esiphansi - isithombe sifika sekwephuzile futhi kuvela isikrini esimnyama esikrinini;
Izinhlelo zokusebenza ezengeziwe ziyasebenza - zisebenzisa ithrafikhi futhi zinciphisa isivinini.
Kungani i-Chatroulette iba yiqhwa
Uma i-chatroulette iba yiqhwa, udinga ukuvula "Isiphathi Somsebenzi" futhi uhlole ukuthi imatasa kangakanani i-CPU.
Uma i-Chatroulette isebenza kancane, ungase ube namathebhu esiphequluli avuliwe noma izinhlelo ezivuliwe.Kunconywa ukuwavala futhi uqale kabusha ikhompyutha yakho.Bese ungakwazi ukuvula i-Chatroulette futhi
Ingxoxo yevidiyo izosebenza kuphela nge-inthanethi enesivinini esikhulu, kufanele futhi ubuyekeze isiphequluli sakho.Kungcono ukusebenzisa iziphequluli ezithenjwayo, njenge-Google Chrome.Lokhu kuxazulula inkinga yokuthi kungani i-Chat Roulette ingasebenzi.